लेहेङगा-चोलीको सट्टा ‘पाइन्ट-सुट’ लगाएर विवाह - Dainik Online Dainik Online
लेहेङगा-चोलीको सट्टा ‘पाइन्ट-सुट’ लगाएर विवाह
प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७७, मंगलबार १२ : ५२
काठमाडौं । साधरणतया बेहुली हुँदा भारतीय महिलाहरुले पहिरोनमा साडी–चोलो वा लेहेंगा–चोली लगाउन प्रचालन छ । तर एक बेहुलीले सुट लगाएर विवाह गरेकी छिन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा २९ वर्षीया सञ्जना रिषीले गत २० सेप्टेम्बरमा दिल्लीकै एक व्यापारी ३३ ध्रुव महाजनसँग विवाह गरिन् ।
उनले हल्का निलो रंगको सुटमा सजिएर बेहुली बनिन् । सञ्जना भारतीय–अमेरिकी उद्यमी हुन्, उनी गत वर्षसम्म अमेरिकामा एक सहयोगी वकिलको रुपमा काम गरिन् । त्यसपछि उनी भारत फर्किएपछि प्रेमी महाजनसँग एक वर्षका लागि लिभिङ टुगेदरमा रहेकी थिइन् ।
उनीहरुको पहिलो विवाह गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा नजिकका साथीभाईबीच हुने र दोश्रो चरणमा भारतीय परम्परामा दिल्लीमा त्यसको अर्को नोभेम्बरमा गर्नुपर्ने थियो । तर कोरोना महामारीकिा कारण योजना अनुसार केही पनि हुन पाएन ।
अमेरिकामा जस्तो भारतमा लिभिङ सम्बन्धलाई त्यति राम्रो मानिन्दैन । त्यसैले उनीहरुलाई साथीभाई, आफन्त तथा छिमेकीहरुबाट सम्बन्धलाई औपचारिकता दिनुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । ‘त्यसपछि गएको अगस्ट महिनाको अन्त्यतिर एक बिहान मैले ध्रुवलाई भने अब विवाह गरौँ ।
र मलाई थाहा थियो म विवाह पाइन्टसुट नै लगाउने छ,’ उनले बिबीसीसँग भनिन् । सञ्जनाको पहिरन भारतीयका लागि बिल्कुलै अनौठो हो । ‘मलाई पर्यावरणीय रुपले दिगो फेसनमा विश्वास गर्छु, र मलाई ‘सेकेन्ड हेन्ड’(पहिला नै प्रयोग गरिसकिएको) कपडाहरु किन्नुमा विश्वास गर्छु’ उनले उक्त सुट धेरै वर्षअघि इटालीमा देखेको बताइन् ।
‘त्यो सन् १९९० मा इटालियन डिजाइनर गियानफ्रान्को फेरीद्धारा बनाइएको थियो । मेरो विवाहसम्ममा पनि उपलब्ध हुनसक्ने सुनेर म अचम्म र खुशी भए,’ सञ्जनाले भनिन्, ‘अमेरिकामा वकिलको रुपमा काम गर्दा सुट मेरो प्राथमिक पहिरन हो र यो साहसी आधुनिक महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।’
उनका बेहुला ध्रव महाजनलाई आफ्नी मंगेतरको पहिरन शैलीप्रति कुनै आपत्ति छैन । ‘जतिबेलासम्म म उनीलाई देखिरहेको हुन्छु, उनले के पहिरिन्छिन् भन्नेबारे ध्यान दिन्न । वास्तवमा यसले मलाई फरक पर्दैन कि उनी के लगाउँछिन्, सञ्ज जे लगाउँछिन् त्यसले उनलाई न्याय गर्छ ।’
पश्चिमा देशहरुमा विवाहमा बेहुले लगाउने पहिरनको शैली परिवर्तन भइसकेको छ, जसमा केही वर्षयता पाइन्टसुट निक्कै प्रचलनमा आएको छ । डिजाइनरहरु पनि विवाह पहिरनलाई अझ नयाँ ढाँचा दिन र नयाँ शैली प्रचलनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।
साफ च्याम्पियन्सिप जित्ने नेपालको सपना चक्नाचुर, भारतसँग ३–० ले हार्‍यो
नेपाल साफ च्याम्पियन्सिपको फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको छ। शनिबार राति सम्पन्न उपाधि भिडन्तमा नेपाल भारतसँग
ढाका। बंगलादेशको हिन्दु मन्दिरमा दुर्गा पुजाको क्रममा भएका आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने सरकारले जनाएको
साफले आफ्नै नियम तोड्दै नेपाली प्रशिक्षक अलमुताइरीमाथि लगायो प्रतिबन्ध
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले शनिबार भारतविरुद्ध हुने साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फाइनल
साफ च्याम्पियन्सिपः भारतलाई हराउँदै नेपाल सामु इतिहास रच्ने मौका
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज भारतसँग भिड्दैछ। खेल मालदिभ्सको मालेस्थित नेशनल
पहिलोपटक साफ फाइनल पुग्ने दाउमा नेपाल, बंगलादेशसँग भिड्दै
काठमाडौं । पहिलोपटक पुरुष साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल नजिक रहेको नेपाल आज (बुधबार) एक अंकका लागि
सर्ट फिल्मले जुर्‍यायो शिवशंकर रिजालको ‘जोगिन्दर’ नाम
जोगिन्दरको उपनामले परिचित शिवशंकर रिजालले हिमालय टेलिभिजन कार्यक्रम गर्न थालेको लामो समय भइसकेको छ। ‘जोगिन्दर
राष्ट्रपति भण्डारी शक्तिपीठहरूको दर्शन भ्रमणमा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने भएकी छन्। बडादसैँका महाअष्टमीको
दसैँ पनि ड्युटी नै हो । सप्तमीमा टुँडिखेलमा फूलपाती बढाइँमा इन्गेज भइहालियो। अष्टमीमा साधारण पूजाहरु
विश्वकै सबैभन्दा लामो नाक भएका मान्छे, उनको नाक अझै बढिरहेको छ!
ठूलो भवनको नवौं तलाबाट खस्दा बीएमडब्लू कुच्चियो, ज्यान जोगियो!
भारतलाई टि–२० विश्वकप क्रिकेटमा हराए पाकिस्तानले ब्ल्यांक चेक पाउने!
दिल्लीको आकाशे पुलमुनि फस्यो एयर इन्डियाको विमान !
चीनमा योगाको ड्र्यागन पोज गर्न खोज्दा हड्डी भाँच्चियो!
यी युवाले राईस कुकरसँग विवाह गरे, तर चार दिनमै सम्बन्धविच्छेद!
हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलले गरे दोस्रो विवाह